सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको वर्षाको प्रेम ! - Lekbesi Khabar
सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको वर्षाको प्रेम !
नायिका तथा मोडल वर्षा शिवाकोटीले अहिलेसम्म कुनै पनि हिट फिल्म दिन सकेकी छैनिन् । उनलाई फिल्मभन्दा बढी म्युजिक भिडियो नै फापेको छ ।
पछिल्लो समय उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘वीर विक्रम २’ पूरै असफल रह्यो । फिल्ममा उनले पल शाह र नाजिर हुसेनसँग काम गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले फिल्म ‘लक्का जवान’ मा काम गरिन् । यो फिल्म कहिले रिलिज हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।
फेरि पनि मेरो कुनै गुनासो छैन !! 🤷🏼‍♀️
Posted by Barsha Siwakoti on Tuesday, November 26, 2019
यता वर्षा भने पछिल्लो समय प्रोफेसनका कारणले भन्दा व्यक्तिगत कारणले चर्चामा छिन् । उनी अमेरिकामा बस्दै आएका सविनजंग थापासँग प्रेममा छिन् । त्यसो त वर्षाको नाम मिलन चाम्ससँग पनि जोडिँदै आएको थियो । वर्षाले सविनजंग थापासँगको प्रेम पनि अझै स्वीकारेकी छैनिन् ।
यद्यपि पछिल्लो समय भने वर्षाले प्रेमिल स्टाटस नै धेरै अपलोड गर्न थालेकी छिन् ।
वर्षाले हालै इन्स्टामा एक तस्वीर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उक्त तस्वीरमा क्याप्सन लेख्दै वर्षाले लेखेकी छिन् – र, यो संसारमा तिमी मेरो हो ।
वर्षाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा पनि अपलोड गर्ने तस्वीरमा प्राय प्रेमकै बारेमा लेखिरहेकी हुन्छिन् ।
प्रेमसम्बन्धका बारेमा खासै बोल्न नचाहने वर्षा सामाजिक सञ्जाल भने प्रेमबारेमै लेखेर रङ्ग्याउँछिन् । हल्ला त यो पनि चलेको छ कि, पछिल्लो समय वर्षा र मिलन चाम्सको सम्बन्ध राम्रो छैन । त्यसैले वर्षाले यसो गरिरहेकी छिन् ।
११ मंसिर २०७६, बुधबार ११:५० November 27, 2019
जाडो बढेसँगै राडीपाखीको कारोवार बढ्यो